Home News Madaxweyne Cagjar iyo Muuse Biixi oo ku kulmaya Xog-wajaale
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kusii jeedda Magaalada Tog-Wajaale ee oo ku taalla Xadka ay waddaagaan Somaliland iyo dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Ujeedada Safarka ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Muuse uu kulan la yeelan doono Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustaf Maxamed Cagjar.
Kulanka ayaa diiradda lagu saari doono xiriirka Somaliland iyo dowlad degaanka Soomaalida.
Waa kulankii ugu horreeyay ee ay yeeshaan Madaxda labada dhinac, waxaana xusid mudan in Madaxweyne Muuse uusan wali la kulmin Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed.
Previous articleNISA oo sheegtay in ay gacanta ku dhigtay Horjeege shabaab ka Tirsan
Next articleJim Mattis oo si deg deg ah isku casilay